I-Storyboarder sisixhobo sasimahla sokwenza ubomi kunye nokwenza ibhodi yamabali | Izidalwa ezikwi-Intanethi
El Umhlaba ophilayo uthabathe utshintsho olukhulu kule minyaka ingamashumi amabini idlulileyo enkosi kwi-3D ehlaziye zombini iifilimu zoopopayi kunye nomdlalo kamabonwakude. Iinkqubo ezinje ngeMaya okanye i-3D Studio Max zithathe inxaxheba kolo tshintsho apho oopopayi bendabuko bathathe isihlalo sangasemva.
Ezi nkqubo zikwabangele ezinye Izifundo ziqala ngombono wokubonelela ngezixhobo zasimahla ukuze nawuphina umntu ongahlawulwayo okanye onobuchule ndibenendawo yokuchaza izimvo zabo ngazo zonke iintlobo zeengcinga kunye noyilo. I-Storyboarder linyathelo elikhulu lokuthatha zombini istudiyo esasisunguleyo kunye nelo khathuni, umfundi okanye ingcali efuna ukuba nesixhobo sasimahla sokuphilisa okanye ukwenza iibhodi zamabali.
Ibhodi yamabali yenzelwe ukuba sisixhobo esikhawulezayo nesilula esisebenzisa izixhobo ezithandathu zokuzoba kunye neepaneli ezinokususwa zijikeleze isikrini njengoko sifuna. Ikwabonakaliswe ngokudityaniswa ngokupheleleyo nezinye iisoftware ezinje ngeFotohop esinokuthi siphucule ngayo kweminye imisebenzi ezifuna izixhobo ezichanekileyo.
Ku nokuba njalo yokungenisa iibhodi zamabali ezizotywe ngesandla ephepheni xa ufota nganye ye-vignettes eneselfowuni, okanye thatha i-generator yokubamba, evumela umsebenzisi ukuba achwethe inkcazo kwibar esecaleni kwaye athathe iimodeli ezibekwe kakuhle ze-3D.
Umntu ophethe ukusizisela esi sixhobo sikhulu liCandelo loKwazisa, Isifundo esincinci esichaze isizathu sokwenza ukuba kufumaneke ukusuka kuluntu simahla. Eyona njongo yayo iphambili kukuphuhlisa amabali amnandi kunye nokuvelisa iimovie. Kungenxa yoko le nto kangangeminyaka besenza izixhobo zesoftware zokusebenzisa ngaphakathi.
El Ukusetyenziswa kwezi nkqubo kunye nezixhobo kubalulekile kuyilo kanye njengoko besitsho. Kwaye bayayiqonda into yokuba ngabo kuphela abaxhamla kwizixhobo ezinje ngeBhodi yamabali yinto abangenako ukuyivuma. Bakholelwa ukuba isixhobo sabo kufuneka kwabelwane ngaso ukuze abaninzi ngakumbi basisebenzise.
Ngoko ke, iyafumaneka kuzo zombini iMac, Windows kunye neLinux. Ungayikhuphela kweli qhagamshelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » I-Storyboarder, isixhobo esitsha esikhululekileyo sokwenza iikhathuni kunye nee-animators
USebastian Guzman Daly sitsho
UBernardo Fuentes Ibaceta ukhumbule indibano yethu yocweyo yamabali ngoncedo lwe-1 joaojajoa
Phendula uSebastian Guzman Daly
UBernardo Fuentes Ibaceta sitsho
Hahahahahahahahaha Ndiphume ndikulungele ukuziphilisa emva kwaleworkshop
Phendula uBernardo Fuentes Ibaceta
utitshala kufuneka afihlwe njenge-ahiti kwaye athengise i-super 8 kwi-cromis joajoa
UThomas Barreda sitsho
Ngoku ndifuna ukwazi ukuzoba iXD
Phendula uTomás Barreda
U-Leo Ferre Albero sitsho
IiChupa Chups zakho ezinemilenze zisebenza kakuhle
Phendula kuLeo Ferre Albero
Hahahahahaha enkosi enkosi